Dagaalka Ruushka ee Ukraine 19 May: Ruushka oo bilaabay Isticmaalka Hubka Laysarka iyo Warar Kale oo dheeri ah
HomeWararka CaalamkaDagaalka Ruushka ee Ukraine 19 May: Ruushka oo bilaabay Isticmaalka Hubka Laysarka iyo Warar Kale oo dheeri ah
May 19, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Warka ugu akhriska badan 0
Foto: Aleksej Aleksandrov / AP / NTB Foto: NTB
Kuwani waa qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ee la xidhiidha dagaalka Ukraine Khamiis 19 May.
*Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa sheegay in uu la hadlayo dalal dhowr ah si looga gudbo cunno yarida. Dagaalka Ukraine ayaa si weyn uga sii daray xaaladda, sababtuna waxay tahay Ukraine iyo Ruushka ayaa ka mid ah kuwa ugu horreeya ee dhoofiya sarreenka iyo shaciga.
Tirada halista ugu jirta cunto yarida ba’an ayaa in ka badan labanlaabmay labadii sano ee la soo dhaafay, waxayna hadda gaarayaan 276 milyan oo qof, sida uu sheegay Guterres. In ka badan 500,000 ayaa gaajo u dhimanaya, taasoo korortay shan laab tan iyo 2016-kii.
Guterres ayaa sheegay in uu wadahadalo adag la leeyahay Ruushka, Ukraine, Turkiga, Mareykanka iyo Midowga Yurub si xal loogu helo xiisadda.
* Saraakiisha ciidamada Yukreeniyaanka ayaa sheegay in ciidanku ay ku sii siqayaan dhowr meelood oo ku yaal agagaarka magaalada Kharkiv. Dhanka waqooyi ee magaalada, askarta Ukraine ayaa xoreeyay tuulada Dementievka, oo u dhow xudduudda Ruushka, sida la sheegay.
Sidoo kale waxaa dagaal uu ka dhacay tuulada Dovhenka oo 25 KM u jirta magaalada Slavyansk ee bariga Ukraine. Dagaalo culus ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa meel u dhow magaalooyinka Lyman, Bakhmut iyo Avdiika, iyo meel u dhow Sevierodonetsk ee gobolka Luhansk. Halkaa, ciidamada cirka ee Ruushka ayaa la sheegay in ay ku taageereen ciidamada dhulka duqeymo badan, balse aan wax horumar ah laga gaarin.
* Ugu yaraan 3,778 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay dalka Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka bishii February, sida ay sheegtay Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha (OHCHR).
Dhimashada ugu badan ayaa ka dhalatay isticmaalka walxaha qarxa oo saameyn weyn ku yeeshay, oo ay ku jiraan rasaas culus iyo duqeymo xagga cirka ah, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, oo aaminsan in tirada dhabta ah ay aad uga badan tahay.
*Ruushka ayaa bilaabay in uu isticmaalo nooc ka mid ah hubka laysarka ah ee cusub gudaha dalka Ukrain, kaas oo awood u leh in uu ku garaaco bartilmaameedyo u jira shan kiilo mitir. Ra’iisul wasaare ku xigeenka Yuri Borisov ayaa telefishinka qaranka ka sheegay in hubka laysarka Talaadadii uu burburiyay diyaarad aan duuliye lahayn oo shan ilbiriqsi ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Tass.
Borisov oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in hubka cusub ee laysarka ee mustaqbalka fog uu u ogolaan doono Ruushka in ay badbaadiyaan gantaalada riddada dheer ee qaaliga ah.
* Senatku waxa ay ansixiyeen dublamaasi khibrad leh oo lagu magacaabo Bridget Brink in uu noqdo safiirka cusub ee Ukraine. Isla maalintaas waxaa dib loo furay safaaradda dalkaas ee Kyiv, saddex bilood ka dib markii la xiray, taasoo ka dhalatay duullaankii Ruushka.
Brink waxa uu ku hadlaa afka Ruushka oo uu hore safiir uga ahaa Slovakia.